विराटगनर महानगरमा कांग्रेसको अग्रता, ७ उपमहानगरमा को अगाडि?
काठमाडौं, असार १५ (सेतोपाटी)
दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएको विराटनगर महानगरपालिकासहित ७ उपमहानगरपालिकाको मतगणना जारी छ। मतगणनाका प्रारम्भिक रिजल्टहरु समेत आउन थालेका छन्। मतगणनाको गति भने ‘कछुवा’ झैँ सुस्त छ।
विराटगर महानगरपालिकामा कांग्रेस अगाडि छ। त्यस्तै बुटवल उपमहानगर, धनगढी, इटहरी र धरानमा कांग्रेस अगाडि छ। एमालेले दाङको तुलसीपुर, घोराही र बाँकेको नेपालगञ्जमा अग्रता लिइरहेको छ।
सबैभन्दा चासोको दृष्टिले हेरिएको विराटनगर महानगरपालिकामा एक सय मत पनि गणना भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको सय मतको गणना हुँदा नेपाली कांग्रेसका भीम पराजुली अगाडि देखिएका छन्।
४६ मत पाएका भीमका निकट्तम प्रतिद्वन्दी एमालेका विनोद ढकालले ३५ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रल्हाद साहले ३ मत प्राप्त गरेका छन्। १०० मत गन्दा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरेको संघीय समाजवादी फोरमले खाता खोलेको छैन। विराटगरमा कांग्रेस एक्लै फोरम लोकतान्त्रिकसँग गठबन्धन गरेको एमाले र माओवादीसँग गठबन्धन गरेको संघीय फोरमसँग प्रतिष्पर्धा गरिरहेको छ।
कुन उपमहानगरमा को अगाडि?
विराटगरपछि चासोका दृष्टिले हेरिएका उपमहानगरपालिका हो रूपन्देहीको बुटवल उपमहागनर। जसमा नेपाली कांग्रेसले अग्रता कायमै राखेको छ। उपनगरपालिकामा मतगणना सुरु भए देखि नै कांग्रेसले अग्रता लिइराखेको छ।
कांग्रेसका मेयर उम्मेद्वार खेलराज पाण्डेले ९७४ मत प्राप्त गरेका छन्। एमाले उम्मेद्वार शिवप्रसाद सुवेदीले ५९४ मत प्राप्त गरेका छन्।
उपमेयरम भने एमाले उम्मेद्वार अगाडि छिन्। एमालेकी गोमा आचार्यले ६८४ मत प्राप्त गरेकी छिन्। उनलाई माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार जगतबहादुर पोखरेलले पछ्याइरहेका छन्। उनले ६४२ मत पाएका छन्। बुटवलमा कांग्रेस र माओवादीले चुनावी तालमेल गरेका छन्।
दाङका दुवै उपममहानगरपालिकामा नेकपा एमालेले अग्रता लिएको छ। तुलसीपुरमा एमालेका मेयर उमेम्द्वार घनश्याम पाण्डे र घोराहीमा नरुलाला चौधरीले अग्रता लिएका हुन्।
तुलसीपुरमा पाण्डेले ७९२ मत पाएका छन्। उनका प्रतिष्पर्धी कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले ५५५ मत प्राप्त गरेका छन्। उपमेयरमा पनि एमालेकी माया आचार्य अगाडि छिन्। उनले ७६९ मत पाएर अग्रता लिइरहेकी छिन्। कांग्रेसकी देविका नेपालीले ५८२ मत पाएकी छिन्।
घोराही उपमहानगरपालिकामा एमालेका चौधीरीले ६९२ मत पाएका छन्। कांग्रेसका भूपबहादुर डाँगीले उनलाई पछ्याइरहेका छन्। डाँगीले ४०१ मत पाएका छन्।
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमालेले सुरुवाती अग्रता लिएको छ।
नेपालगञ्जमा एमालेका शम्सुद्धिन सिद्दीकीले अग्रता लिएका हुन्। उनले १ सय ३७ मत प्राप्त गरेका हुन्। उपमेयरमा पनि एमालेले अग्रता लिएको छ। एमालेकी शान्तिदेवी ढकालले १ सय ३८ मत पाएकी छिन्।
एमालेलाई कांग्रेसले पछ्याइरहेको छ। कांग्रेसका डा सुरेशकुमार कनौडियाले १ सय २२ मत पाएका छन्। उपमेयर उम्मेद्वार उमा थापामागरले १ सय २१ मत ल्याएकी छिन्।
माओवादी केन्द्रका मेयर उम्मेद्वार दामोदर आचार्यले ५७ मत ल्याएका छन् भने उपमेयर उम्मेद्वार कलामुन अन्सारीले पनि ५७ मत नै ल्याएकी छिन्।
राप्रपाका मेयर उम्मेद्वार र उपमेयर उम्मेद्वारले पनि ८७/८७ मत ल्याएका छन्।
सुदूर पश्चिमको कैलालीको धनगढी उपमहानगरमा पनि कांग्रेसले अग्रता लिएको छ। कांग्रेसका मेयर उमेदवार नृप बडले ले ३ सय ३४ मत पाएका छन । उनलाई पच्छाइरहेका स्वतन्त्र उमेदवार गोपाल हमालले २ सय ८९ मत ल्याएका छन् । माओवादी केन्द्रका राम समझ रानाले ७२ मत ल्याएका छन्। झण्डै एक हजार मत त्यहाँ गणना भएको छ।
त्यहाँ ५४ हजार ३७९ मत खसेको थियो।
सुनसरीका दुई उपमहानगर धरान र इटहरीमा पनि कांग्रेस अगाडि छ। इटहरी उपमहागरपालिकामा पनि कांग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका मेयर उम्मेद्वार रोहित प्रसाईले २२४ मत प्राप्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार द्वारिकालाल चौधरी १९७ मत प्राप्त गरेको छ।
धरान उपमहानगरपालिकामा पनि कांग्रेसले अग्रता लिइराखेको छ। कांग्रेसका मेयर उम्मेद्वार तिलक राईले ५३ मत प्राप्त गरेका छन्। उनलाई एमाले उम्मेद्वार तारा सुब्बाले पछ्यारुहेका छन्। सुब्बाले २० मत ल्याएका छन्। माओवादी केन्द्रका अइन्द्र विक्रम बेघाले भने ९ मत पाएका छन्।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार १५, २०७४ ०९:०६:३९